शरीरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले रगत चुस्दा भएको हो त ? – Jagaran Nepal
शरीरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले रगत चुस्दा भएको हो त ?
Jagaran Nepal बिहिबार, भाद्र ०४, २०७७
साँझ सुतेर बिहान उठ्दा कहिलेकाहिँ तपाईंको शरीरमा निलो दाग देखिन्छ ? यस्ता दाग दुख्छ पनि होला ! तर, के तपाईंलाई थाहा छ कि यस्तो दाग र चोट किन लाग्छ ?
नेपाली समाजमा त बोक्सीले रगत चुसेका कारण शरीरमा यस्तो दाग देखिन्छ भन्ने माान्यता पनि छ । के तपाईं पनि यस्तै सोच राख्नुहुन्छ ? यदि शररीमा देखिएको दाग–धब्बालाई बोक्सीले रगत चुस्दा भएको मान्‍यता राख्नुहुन्छ भने यो एउटा अन्धविश्वास मात्रै हो ।
खासगरेर महिलाको खुट्टा र पाखुरामा यस्तो दाग देखियो भने बोक्सीले चुसेको भन्ने गरिन्छ । तर, यसमा कुनै सत्यता हुँदैन ।
चिकित्सकहरु शरीरमा यस्तो निलो दाग ८ ओटा कारणले देखिन सक्ने बताउँछन् । ति ७ कारण निम्नानुसार छन्,
आम रुपमा छालामा चोट लाग्दा यस्तो दागहरु देखिन्छ । कहिलेकाँही तपाईंको आफ्नै शरीरको भागले पनि अर्को भाग थिच्चिने अवस्था हुन्छ । यस्तै कुनै बस्तुसँग ठक्कर खाँदा पनि यस्तो चोट लाग्न सक्छ ।
यसरी चोट लाग्दा शरीरका रक्त धमनिमा असर पुग्न जान्छ, जसका कारण शरीरमा निलो दाग देखिन्छ ।
रगत जम्न र रगतका धमिनिमा लाग्ने चोटहरु भर्नका लागि हाम्रो शरीरलाई केही भिटामिन र मिनरलको आवश्यकता पर्छ । यसकारण तपाईंले खानामा यस्तो भिटामिन र मिनरल प्राप्त हुने चिजहरु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।